जर्मनीका प्रशिक्षक योचिम लोको पारिश्रमिक सबैभन्दा बढी, अरुको कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
जर्मनीका प्रशिक्षक योचिम लोको पारिश्रमिक सबैभन्दा बढी, अरुको कति ?
एजेन्सी । विश्वकपमा खेलाडीहरु जति महत्वपूर्ण हुन्छन् त्यति नै प्रशिक्षक पनि हुन्छन् । कुन खेलाडीलाई कसरी प्रयोग गरी खेल आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने योजना प्रशिक्षकको हुन्छ । त्यसैले प्रशिक्षकको पनि खेल बजारमा राम्रै चर्चा हुने गरेको छ ।
यसैबीच सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने प्रशिक्षक जर्मनी योचिम लो हुन् । उनले वार्षिक ३८ लाख ५० हजार युरो कमाउँछन् । त्यस्तै सबैभन्दा कम पारिश्रमिक सेनेगलका प्रशिक्षक अलिउ सिसेले लिन्छन् । उनले मात्र २ लाख युरो पारिश्रमिक लिन्छन् ।
चर्चामा रहेका अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक जर्ज साम्पोलीको पारिश्रमिक १८ लाख युरो छ भने ब्राजिलका टिटेको ३५ लाख युरो छ । त्यस्तै यसपटकको आयोजक राष्ट्र रसियाको प्रशिक्षक स्तानिस्लाभ चेर्चेसोभको पारिश्रमिक २६ लाख युरो छ ।
स्पेनका जुलेन लोपेटेगुईले ३० लाख युरो कमाउँदा पोर्चुगलका फर्नाण्डो सान्तोसले २२ लाख ५० युरो कमाउँछन् । उरुग्वेका प्रशिक्षक ओस्कार टाबारेजको वार्षिक पारिश्रमिक १७ लाख युरो रहेको छ भने इंग्ल्याण्डका प्रशिक्षक जर्ज साउथगेटको २० लाख युरो छ ।
फ्रान्सका प्रशिक्षक डिडियर डेसक्याम्प्स पनि महंगा मानिन्छन् । उनको पारिश्रमिक ३५ लाख युरो छ । इरानका प्रशिक्षक कार्लोस क्वेरोजको पारश्रमिक २० लाख युरो छ ।